Maalinta: 9 Oktoobar 2019
1. PASTAVILLA PASTA Pastavilla, maadaama loo maleynayo inuu yahay astaanta Talyaaniiga ee baastada Turkiga. Waxaa la aasaasay 1928. Waqtigaas, waxaa loogu magacdaray 'Pastavilla' 1992 markii loogu yeeri jiray Kartal Pasasta waxayna ilaa maantadan timid. 2. GURIGA TÜRKÇE Si aad u Hesho Turgut Aydın Holding [More ...]
OUR OIL: Yıldız Holding wuxuu summaddeena ka iibiyay Ajinomoto Jabbaan ah 2016. COLA TURKA: 2015 waxaa iibiyay Ülker Jabbaan Dydo DRINCO. MILK: Waxaa cabay kooxda Faransiiska ee 'Lactalis'. SANA OIL: [More ...]
Metro Istanbul waxay xaqiijisay mashruuca wax soo saarka ee khariidad tirka guryaha kaas oo tamar siin doona metrooga iyo taraamyada. Markaa, malaayiin yuuro ah ayaa kusii nagaan doona xuduudaha dalka. Shirkadaha hoosaad Istanbul degmada Metropolitan ee Metro Istanbul, Istanbul ee muhiim ah dhaqaalaha Turkiga [More ...]
Agaasinka Guud ee Maamulka Duulista Hawada (DHMI), sanadka 2019 ee bisha Sebtember diyaaradda, rakaabka iyo tirakoobka xamuulka ayaa shaaca ka qaaday. Sidaas awgeed, bishii Sebtember; tirada diyaaradaha raacaya ee tagaya gagida diyaaradaha, 77.365 gudaha [More ...]
Machadka Istaandarrada Turkiga (TSE) Isuduwaha Gobolka Kayseri ee istiraatiijiyada maaraynta tayada shirkadayada ayaa la qabtay. Kulan qiimayn ah oo la qabtay baaritaanka kadib, waxaa lagu cadeeyay in shirkadeena ay soo bandhigtay maamul ku guuleysta xaga tayada, deegaanka, tamarta, caafimaadka shaqada iyo amaanka. Tse [More ...]
Naadiga Sivas Demirspor 2019-2020 ayaa furmay xilli ciyaareedka. Barnaamijka furitaanka xilliyeed ee kooxda Sivas Demirspor Naadiga guud ee Tüdemsaş Maareeyaha guud iyo Gudoomiyaha Sivas Demirspor Club Mehmet Basoglu, Demiryol-Is Union Sivas Xoghayaha Laanta dhaqaalaha Kemal Khabiir, Khadka Sivas Demirspor Club [More ...]
Dowlada Hoose ee Magaaladu Malatya waxay ku hawlantahay isbadal, isbadal iyo dib u cusbooneysiin howlo ku saabsan Dahabka "Abricot Boulevard", oo ah boulevard ugu weyn Malatya, kaasoo isku xira Tecde iyo Isgoyska Maşti. 3.3-kiiloomitir-dherer, 50 mitir-ballaaran oo ah tufaaxa dahabka ah [More ...]
Duqa Magaalada Gaziantep Fatma Sahin, Degmada Belkis ee degmada Sehitkamil waxay booqdeen xaafadaha. Sahin, si loo xalliyo dhibaatada joogsiyada basaska oo aan ku filnayn kooxda xaafadda, Belkis wuxuu codsaday in la bilaabo dadaallo lagu kordhinayo joogsiga baska ee xaafadda. bulshada [More ...]
Diyaar garoowga Ciyaaraha Qaranka ee Duulimaadka mitidka ee magaalada Istanbul. IMM, kaas oo lagu ciyaari doonaa habeenka jimcaha ee Turkey - kulan caalami ah Albania ahayd wakhti kordhin saacadaha khadadka dhulka hoostiisa qaar ka mid ah. Duullimaadyada ku saabsan khadadka tareenka ee ay maamusho Metro Istanbul, oo ah shirkad ka socota Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul (IMM), 11 [More ...]
In kasta oo hoos u dhaca weyn ee 2019 ee shilalka Metrobus, IETT ay qiimeyn cusub ku sameysay laba shilal oo dhowaan dhacay. Madaxa guddiga kormeerka ayaa shaqsiyan loo xilsaaray inuu baaro shilalka. Khabiir laga codsaday rugta injineerinka farsamada [More ...]
Night ken Intii aan dhexdeenayay websaydhka 'TCDD', waxaan nafteena ku aragnay bogga Barnaamijka Maalgashiga ee 2019. Intaa waxaa dheer, waan la yaabnay markaan aragnay macluumaadka ku yaal bogga. Waxa aan aragno waa tan: Agaasinka Guud ee TCDD 1 Bishii Agoosto 2019 wuxuu sameeyay dib-u-fiirinta shanaad ee barnaamijka maalgashiga. [More ...]
Bandhigga "laga soo bilaabo Istanbul illaa Hijaz: Hicaz Railways oo wata dukumiintiyo" oo ay soo qabanqaabisay Hay'adda Iskaashiga iyo Xiriirinta Turkiga (TIKA) iyo Machadka Yunus Emre (YEE) ayaa laga furay Irbid, oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalka Urdun. Bishii Juun ee la soo dhaafay T withKA iyo YEE [More ...]
Kuxigeenka CHP Bursa, xubin ka tirsan golaha baarlamaanka Nurhayat Altaca Kayışoğlu, wasiirka gaadiidka iyo kaabayaasha Mehmet Cahit Turhan ayaa weydiiyay goorta la dhameystiri doono Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare ee Bursa Ankara. Aasaaska Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare ee Bursa-Ankara 23 Diseembar [More ...]
3 wuxuu diiradda saarayaa nidaamyada tareenka metrooga. Madasha Caalamiga ah ee Metrorail Forum waxay ku soo ururtay go'aan sameeyeyaasha dadweynaha iyo waaxda gaarka loo leeyahay ee Ankara ATO Congresium. Iyada oo laga duulayo Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha, TCDD Taageerada ugu weyn, KGM, AYGM Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul [More ...]
Hemzemin Geçitlerde Kauçuk Kaplama Yapılması Demiryolu İşleri Yaptırılacaktır Benzer Demiryolu Haberleri ve İlginizi Çekebilecek Diğer HaberlerRayHaber 25.01.2019 İhale Bülteni 25/01/2019 Sistemimizde 25.01.2019 gününe ait herhangi bir ihale kaydı bulunmamaktadırRayHaber 04.02.2019 İhale Bülteni 04/02/2019 Sistemimizde 04.02.2019 [More ...]
Hyva Group waxaa lagu qabanqaabiyaa Turkey "International Rail, Light Rail iyo Logistics Fair" - rail EURASIA dhexeeya xnumx'uncu ee March 9 3-5 lagu qaban doonaa TUYAP Fair Center ee Konya. Carwadan, oo lagu qabtay magaalada İzmir ilaa maanta, ayaa lagu qaban doonaa Konya. [More ...]
Turkey tareenka iyo Engine Industry xaaqiijiyay (TULOMSAS), Rafaa Jarmal baabuurta Volkswagen in la soo saaray ee warshadda cusub oo la cayimayo in la aasaaso dalka Turkiga ayaa la filayaa in ay fuliyaan "laba dabaq baabuur" images noocooda, markii ugu horeysay ee HaberTürk ... Halkan Turkey, TULOMSAS ' Injineero iyo farsamoyaqaano Turkiga ah oo jooga xarumaha Eskişehir [More ...]
Madaxweynaha MESİAD Hasan Engin wuxuu carabka ku adkeeyay in Mersin uusan heysan waqti uu ku lumiyo si uu u xaliyo dhibaatada gaadiidka, taas oo ah dhibaatooyinka ugu weyn magaaladeena. Metro [More ...]
Duulimaadyada Metro Metro ee kusoo kordha Istanbul. Sida lagu sheegay bayaanka ka soo baxay Metro Istanbul, M6 Levent-Boğaziçi University / Hisarüstü metro line waxay kordhisay tirada duullimaadyada. Qoraalka qoraalka ah, weedhahan soo socda ayaa la bixiyay: [More ...]
Maanta in History October 9 1890 dhimista ka wakiil ah Deutsche Bank simaha Line keniisad in Thessaloniki ay sabab u tahay koox Jarmal waxaa la guddoonsiiyey M. Alfred ku Kaulla. Waxaa la siiyay Feriz ka hor Maraykanka. 9 Oktoobar 1918 Tareenada Toros iyo Amanos waa la dhammeeyaa. dhismaha [More ...]